LookBookHQ: Votoatin'ny firaketana atiny sy ny automatique | Martech Zone
Talata, Jolay 26, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Rehefa mamolavola paikady atiny ho an'ny mpanjifanay izahay dia matetika no miasa amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo sy fikasana. Manosika votoaty malalaka be dia be izahay izay miditra amin'ny infografika amin'ny antsipiriany izay miditra amin'ny taratasy fotsy na fanadihadiana tranga. Ho an'ny mpitsidika mikaroka ny fividianany manaraka, dia ankafizin'izy ireo ny fifantohana hatramin'ny malalaka ka hatramin'ny tery nefa tsy mandany fotoana.
Ahoana raha azo kolokoloina izany dian'ny votoaty izany, ampianarina manokana arakaraka ny angon-drakitra momba ny mpitsidika, ary atosika amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra mifandraika amin'ny hafainganan'ny mpividy? Cetera Financial, sehatry ny torohevitra momba ny fampiasam-bola amin'ny varotra, dia nahitana fa ny mpitarika nisafidy ny hibanjina ny atiny dia 2.4X azo ekena kokoa
Vakio ny Whitepaper: Miorina amin'ny mpividy haingana ankehitriny
Izany no traikefa izay LookBookHQ manome mpivarotra atiny be pitsiny.
Ny LookBookHQ dia manampy anao hisambotra ireo fotoana ireo amin'ny alàlan'ny fifindrana amin'ireo fandaharam-potoana voalahatra, iray sy efa vita mankany amin'ny varotra fitondran-tena, ary amin'ny marketing mandrakariva izay manintona ny sain'ny mpividy raha azonao izany.
Ny fiasa LookBookHQ dia misy
Fijery Piramida amin'ny atiny - Omeo fananana mifandraika amin'izay azon'ny mpitsidika zahana amin'ny hafainganana.
Topin'ny Grid ao anatiny - Miaraha mamorona microsite mahasarika maso sy fananana atiny mifandraika amin'ny fonosana.
Fijerin'ny volo anatiny - Sariho ny dia tianao tadiavin'ny vinavinanao amin'ny fampiroboroboana atiny ara-potoana, endrika ary traikefa manokana.
Jery ​​fizotran-kevitra - Mampiroborobo fananana atiny marobe izay azon'ny mpitsidika aleha mandritra ny fotoana iray.
Fantaro ireo Prospect - Jereo ny fifandraisan'ny fifandraisana tsy fantatra anarana sy ny fantatra amin'ny fananana atiny.
Refesina fampiroboroboana - Jereo hoe ohatrinona ny fananana ampiarahin'ny vinavina sy ny faharetany.
Fiaraha-miasa mitambatra - Fakafakao ny angona angon-drakitra fampifangaroana hahafantarana hoe inona no atiny tena miasa.
Fanamarihana sy fizarana - De-fanalana anarana ireo mpitsidika fantatra sy ny atiny fahana mifototra amin'ny sehatra na isa azony.
Capture capture - Fantaro ny fotoana sy ny toerana hanampiana teboka fiovam-po amin'ny traikefa amin'ny atiny.
Makà andrana fitsapana an'ny LookBookHQ
Tags: cetera ara-bolaautomatique atinyfifandraisan'ny atinydia atinyContent Marketingautomatique marketing amin'ny atinydia marketing amin'ny atinyfanarahana ny atinyMpanjanantanyandraikitralookbookhqfanarahana ny atiny